**လှည်းတန်းဈေးအနီးနားက အပီဆွဲ စားစရာလေးတွေ**
ငွေ၅၀၀၀ကျော်နဲ့ လှည်းတန်းအနီးတ၀ိုက်မှာ ဘော်ဒါတွေ ဘော်ချွတ်တွေ
အပီဆွဲလို့ကောင်းပြီး ဗိုက်လည်းဝ အရသာရှိမယ့် ဆိုင်လေးတွေ ပြောပြပေးမယ်…
🥟🥖လှည်းတန်းဈေး ရှေ့နားက ဖက်ထုပ်နဲ့ကော်ပြန့်ကြော်ဆိုင်လေး🥟🥖
အဲ့ဆိုင်လေးမှာ ဖက်ထုပ်ကြော်၊ ကော်ပြန့်ကြော်အပြင် ဘဲသားမုန့်၊ ပဲမုန့်၊
မုန့်လင်မယားတို့ပါရောင်းတယ်ဗျ… ဖက်ထုပ်ကြော်ရော ကော်ပြန့်ကြော်ရော
၅၀၀ဖိုးကို ၇ခုတဲ့ဗျ... တစ်ထောင်ဖိုးဝယ်တော့ ၁၄ခုရတယ် ;)
ဖက်ထုပ်လေးတွေကို ငါးဖယ်လေးတွေ အလယ်မှာ ထာပနာလုပ်ပေးထားပြီး
ငှက်ပျောရွက်လေးတွေနဲ့ စည်းထားပေးတော့ စည်းကြိုးလေးတွေကလည်း
စားလို့ ရတယ်ဗျ… ကော်ပြန့်ကြော်လိပ်ထဲမှာဆို အာလူးအရသာလေးတောင်
ခံစားရတယ်… အာလူးလေးတွေတောင် ပါတယ်ဗျ… ဒီဆိုင်လေးက
ဒီလှည်းတန်းဈေးရှေ့နားလေးမှာ ရောင်းနေခဲ့တာ ၁၁နှစ်ကျော်ရှိပြီတဲ့ဗျ…
ဈေးတန်ပြီး စားကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးမို့ လမ်းကြုံတဲ့အခါ မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့
🌮 စိန်ဂေဟာဘေးက လင်းပြည့် - ဘိန်းမုန့်၊ မုန့်ပစ်သလက်
စိန်ဂေဟာဘေးနား လင်းပြည့် ဘိန်းမုန့်၊ မုန့်ပစ်သလက် ဆိုင်လေးကလည်း
ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ မျက်စိကျစေတဲ့ဆိုင်လေးပါပဲ… အဲ့ဆိုင်လေးလည်း
ဖွင့်ခဲ့တာ အတော်လေးကြာပြီဗျ… ဘိန်းမုန့် အချိုစားစား အစပ်စားစား၊
မုန့်ပစ်သလက်စားစား ကြိုက်တာစား တစ်ထောင်ဖိုး ၄ချပ်တဲ့ဗျ… တန်လည်း
တန် စားလို့လည်း ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးမို့ ကြုံကြိုက်တဲ့အခါ အားပေးလိုက်ပါဦးဗျာ...
🥤 ဆုကော်ဖီဆိုင်လေးအကျော်က သစ်သီးဖျော်ရည်ဆိုင်လေး
အရသာကလည်းမွှေးပီးချိုနေတာပဲ ရင်ထဲလည်းအေးနေ ရော ပီးတော့
ကျောက်ကျော ဖျော်ရည်လေး ရယ် ဆေးကုလားမ ဖျော်ရည်လေးရယ်
အဲနှစ်မျိုးကတော့ ဖျော်ပီးသားကိုဖန်ပုံးထဲထည့်ထားတယ် အရသာလေး
ကတော့ ချိုချဉ်လေးနဲ့အေးအေးလေးဆိုတော့ လှည်တန်းတ ခွင်လျှောက်ပတ်
စားပီး အအီပြေ လေး ကိုဈေးသက်သက်သာနဲ့ သောက်နိုင်တာပေါ့ဗျာ...
🍲 မာလာဟင်းနဲ့ သင်္ဘောသီးထောင်းက လှည်းတန်းစင်တာရှေ့နားမှာ
စားစရာအမယ် စုံလင်လှတယ်ဗျ မာလာဟင်း သဘောင်္သီးထောင် တင်မကပါဘူး..
ငါးကင် ရွှေဘဝဲသုပ် ဝက်အစုံသုပ် ကြာဇံကြော် ကြက်ခြေထောက် ခေါက်ဆွဲပြုတ်
တော်တော်စုံနေပါပြီနော် အမယ်လဲစုံတယ် ဟင်းပွဲအရသာတွေက ခံတွင်း
တွေ့ ဈေးနှုန်းလေးတွေက အနေတော်လေးတွေပေါ့……
ဒါပေမယ့် ဆိုင်တွေက ကားလမ်းမကြီးဘေးတင်ဆိုတော့ သန့်ရှင်းမှုတော့
😋 ကဲ...အက်မင်တို့ စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ လှည်းတန်းအနီးနားက စားကောင်းပြီး
အရသာရှိတဲ့ Street Food လေးတချို့တော့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီနော်…
အစားတစ်လိုင်းတို့လည်း စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ လှည်းတန်းအနီးနား
ဆိုင်လေးတွေရှိရင် Comment လေးမှာ အပြန်အလှန် မျှဝေခဲ့ဦးဗျ…
နောက်အပတ်တွေ ဘယ်တွေ သွားစားစေချင်သလဲဆိုတာလဲ ပြောပြပေးသွား
လို့ရပါတယ်… ချစ်သောအစားတစ်လိုင်းလေးတို့ရေ 🤗❤️😇
#Asartaline #FoodReview #StreetFood
Posted by AsarTaLine at 3:04 AM No comments:
**Fine Diningတွေမှာ စားရတဲ့ လက်ရာအနေအထားနဲ့ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ နိုင်ငံစုံ စားသောက်ဆိုင်ကြီး**
**Fine Diningတွေမှာ စားရတဲ့ လက်ရာအနေအထားနဲ့
ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ နိုင်ငံစုံ စားသောက်ဆိုင်ကြီး**
Foreignပြန် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မနက်စာလိုက်ကျွေးမယ်ဆိုလို့ အက်မင်တစ်ယောက် စားရချည်ရဲ့ဆိုပြီး လိုက်သွားမိတဲ့ဆိုင်က အနေအထား ဒီဇိုင်းကာလာ ဘာညာက လုံးဝအဖိုင်းဗျာ.. လက်ရာကလည်း ရှယ်ကောင်း။ ၀န်ဆောင်မှုလည်း ပြောစရာမလို လိုလေသေးမရှိ ကောင်းမွန်လွန်းတဲ့ အက်မင်ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံ Foodfare Fusion Kitchen အကြောင်းလေး ပြောပြချင်သေးတယ်ဗျ…
ကားပါကင် ကျယ်ဝန်းပြီး၊ သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေတဲ့ တာမွေ၊
ကျိုက္ကဆံလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတယ်ဗျ… အက်မင်သတိထားမိသလောက်တော့ ဒီဆိုင်လေးက ဖွင့်တာ တော်တော်တော့ကြာပြီဗျ.. သူ့ဆိုင်မှာ ယူရို၊ ထိုင်း၊ တရုတ်၊ မလေးရှားနဲ့ အိန္ဒိယစာတွေကို စုံလင်အောင်ရတယ်ဗျ…
Menu Book ကို လှန်လှောကြည့်လိုက်တော့လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ
Menu တွေနဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို တွေ့မြင်ရတယ်…
ဈေးနှုန်းတွေကလည်း 2000 ကနေ 8000 ကြားဆိုတော့ ဒီဆိုင် ဒီအနေအထားမှာ တော်တော်တော့ မဆိုးဘူးပြောရမယ်… အက်မင်ဒီလို သုံးသပ်မိတာ စားဖွယ်တွေကို မမြင်တွေ့ရသေးခင်၊ လက်ရာကို မခံစားရသေးခင်နော်…
အဲ့ဆိုင်မှာ အက်မင်တို့သူငယ်ချင်းတွေ စားဖြစ်ခဲ့တာလေးတော့ မလေးရှားနဲ့
🍙 ပိရမစ်တိုရှည် - တိုရှည်တော့ တိုရှည်ပဲ အထောင်လိုက်လေး လာချပေးတော့ ပိရမစ်လိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ… ပဲဟင်းဖြူလေးရယ်၊ ပဲဝါဟင်းလေးရယ်၊ အချဉ်၊ အစပ်လေးတွေရယ်နဲ့ တွဲဖက်စားတယ်… ပဲဝါဟင်းလေးထဲမှာ
ဒန့်ဒလွန်သီးလေးတွေတောင်ပါသေး… ပဲဟင်းကော အချဉ်အစပ်တွေကောက လုံးဝ မိုက်တယ်… ;)
🥔 အာလူးပူရီ - အာလူးအနှစ်အတော်လေးကောင်းတယ်… ပူရီသားကလည်း မထူမပါးလေးမို့ စားရတာ အဆင်ပြေတယ်…
🥞 ကြက်ကီးမား - တစ်ပွဲကို တော်တော်လေးများပါတယ်… အထဲမှာလည်း အသားတွေ အဆာပလာတွေ နိုင်ချင်းနဲ့ ထာပနာလုပ်ပေးထားတယ်… ပလာတာသား နူးညံ့တယ်ပြောရမယ်…
🍖 ဆိတ်စွပ်နံပြား - ဆိတ်စွပ်ကနူးနေရောဗျာ… ဆိတ်စွပ်လေး ဆိတ်ရိုးလေးစုပ် ရှယ်ပဲဗျာ… နံပြားကလည်းကောင်းတော့… လိုက်ဖက်ညီနေရောဗျာ…
🥛 နို့ပေါင်းလက်ဖက်ရည် - ကျွဲနို့နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာတဲ့ဗျ… ကျွဲနို့ရဲ့ ပရိုတိန်းဓါတ်ကြွယ်ဝမှုရယ်၊ လက်ဖက်ရည်ရဲ့ စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းမှုရယ်က တစ်နေ့တာကို အားအင်ပြည့်ဝ လန်းဆန်းစေမှာမို့ ကွက်တိပဲ!
🍗 Tandoori Chicken - အိန္ဒိယစတိုင်ကြက်ကင်
အက်မင်ကတော့ ကြက်ကင် ပေါင်တွေကို အချောင်းလိုက်ကိုင်ပြီး ရှယ်ကိုက်တော့တာပဲ… အသားကနူးနေတော့ အတော်မိုက်တာဗျ…
🥘 Kadai Chicken - အိန္ဒိယစတိုင်ကြက်သားငရုပ်စပ်
🥠 Chicken Malai Tikka - အိန္ဒိယစတိုင် မလိုင်အနှစ်စိမ်ကြက်ကင်
မလိုင်အနှစ်လေးတွေစိမ်ထားတော့ အတွင်းထဲထိစိမ့်ဝင်နေပြီး အရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ ကြက်သားနူးနူးလေးက တကယ်ကိုလုံးဝမိုက်တယ်… ဒါကတော့ အက်မင်အကြိုက်ဆုံး အခိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဟင်းပွဲလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်…
🍝 Mee Goreng - မလေးရှားခေါက်ဆွဲကြော်
ဒီခေါက်ဆွဲပွဲက ခေါက်ဆွဲကြော်စားရင် အီတယ်ဆိုတဲ့ concern လုံးဝဖျောက်ပေးလိုက်တာပဲ… အက်မင်တို့ ပင်လယ်စာနဲ့စားဖြစ်တယ်… ပုဇွန်တွေ ပြည်ကြီးငါးတွေ အတော်လေးများတယ်ဗျ…
🥪 ဆီခြောက်ပလာတာ - ဆီခြောက်ပလာတာလေးကို ပဲအနှစ်နဲ့ရောစားတာ ရှယ်မိုက်တယ်ဗျ… မုန့်သားတွေ ဒီလောက် ကောင်းနေတာ ဂျုံနယ်တာ အတော်လေး ဆရာကျတယ်ပြောရမယ်…
🌮 နံပြားထောပတ်သုတ် - ထောပတ်တွေရွှဲရွှဲသုပ်ထားပေးတယ်… မွှေးပြီးစားလို့ကောင်းတယ်ဗျ… နို့ပေါင်းလက်ဖက်ရည်လေး သောက်လိုက် နံပြားထောပတ်သုပ်လေးစားလိုက်… ရှယ်ပဲ 😎
💥✨ ဆိုင်ကြီးတခမ်းတနားနဲ့ ဈေးတွေတော့ ဆော်ပြီထင်တာ လုံးဝ ဈေးမကြီးဘူး… ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်လေးတွေနဲ့ လက်ရာနဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ရှယ်ကောင်းလို့ အစားတစ်လိုင်းဘော်ဘော်တို့ကို သတင်းကောင်းလေး မျှတယ်နော်… ;)
⭐ သန့်ရှင်းမှု -5/ 5
⭐ အရသာ -5/ 5
⭐ ၀န်ဆောင်မှု -5/ 5
⭐ နေရာထိုင်ခင်း -5/ 5
⭐ ဈေးနှုန်း -4/ 5
ဆိုင်အမည် - Foodfare Fusion Kitchen
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - မနက် ၆ နာရီ ~ ည ၁၁ နာရီ
ဆိုင်လိပ်စာ - No.102-104, Kyaik Ka San Rd, Tamwe. ကျိုက္ကဆံလမ်းမ၊ အ.ထ.က(၅)တာမွေရှေ့။
📍 Google Map - https://goo.gl/maps/7rNSX5Hs2Bx
✅ Facebook Page : www.facebook.com/FoodfareFusionKitchen
#Asartaline #FoodReview #FoodfareFusionKitchen #Tamwe
Posted by AsarTaLine at 1:46 AM No comments:
**မေတ္တာတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့ ဂျပန်ပဲချိုမုန့် ယောကုချိယ**
အစားကောင်းစားရတဲ့အခါ ချစ်ခင်သူတွေကို သတိရတယ်ဆိုတဲ့
စကားအတိုင်း အက်မင်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က စားဖို့ရာ
အစားတစ်လိုင်းတို့ကိုလည်း သတိတရနဲ့ ဝေမျှပေးချင်တယ်ဗျ…
မုန့်ဗူးလေးရဲ့ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံကိုသဘောကျလွန်းလို့ မစားခင်မှာပဲ
ဓါတ်ပုံတ၀ရိုက်ထားမိတယ်... ဗူးလေးကို ဖောက်လိုက်တော့လည်း
အထဲမှာ Shinanoji (ရှီနနော့ဂျီး) အချောင်းလေး ၆ချောင်းနဲ့
Yomoyama (ယော်မို့ယာမ) အ၀ိုင်းလေး ၁ခုပါတယ်ဗျ...
နှစ် ၃၈၀ ကျော် သက်တမ်းရှိ ဂျပန် နန်းတွင်းမုန့် ယောကုချိယ
ဆိုတာ အရည်သွေးမြင့် ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတာကြောင့်
ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ပဲစားစား၊ ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်၊ နွားနို့တို့နဲ့ပဲစားစား
ပနံတင့် အရသာရှိ လိုက်ဖက်လှတယ်ဗျ... ကျနော်ကတော့ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ပဲ
မုန့်ကိုအရသာခံ စားတယ်... တစ်ထိုင်တည်းစားလိုက်တာ မုန့်ဗူးလေးလည်း
ပြိုက်ခနဲပဲ... မုန့်လေးတွေရဲ့ အရသာလေးတွေကတော့
သူ့ရဲ့ Taste က smooth & sweet ပေါ့ဗျာ...
သူကတော့ အချောင်း ပုံသဏ္ဍန်လေးပါ… အရသာလေးက နူးညံ့တယ်…
အရမ်းကို နူးညံ့ပြီး စားလို့လွယ်ကူကောင်းမွန်လှသလို ပဲအချိုအနှစ်ကို
ဌာပနာထည့်ထားတဲ့အတွက် အတွင်းသားမှာလည်း ပဲချိုနှစ်အရသာ
ဆိမ့်ဆိမ့်လေးခံစားရတယ်ဗျ… အပေါ်ယံလွှာမှာလည်း သကြားမှုန်လေးတွေ
ကပ်ပေးထားပေးတော့ ချိုမြမြအရသာလေးကို ထပ်ခံစားရတယ်ဗျ…
သူကတော့ အ၀ိုင်းသဏ္ဍန်လေးဗျ… Ryoguchiya-Korekiyo ရဲ့
အရောင်းရဆုံးနဲ့ အကျော်ကြားဆုံး မုန့်ဗူးထဲမှာ ဒီမုန့်လေးကို ထည့်သွင်း
ထားတယ်ဗျ… သူ့မှာလည်း ရှိနနော့ဂျီးလိုပဲ ပဲအချိုအနှစ်ကို ဌာပနာထည့်ထား
သလို အပေါ်မှာ နှင်းမှုန်သကြားလေးတွေကပ်ပေးထားပေးတယ်ဗျ…
ကောင်းမွန်တဲ့အရသာ၊ ဆန်းသစ်ခန့်ညားတဲ့ ထုတ်ပိုးမှုတွေနဲ့ ‘ယောကုချိယ’ဟာ
မကြာမီအချိန်မှာ မြန်မာပြည်တွင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားမှာဖြစ်တာမို့
ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ ‘ယောကုချိယ’ကို ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ရှူစားရင်း
ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါ အားပေးနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…
ကျနော့်လိုပဲ ယောကုချိယကို မြန်မာပြည်ရောက်လာဖို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့
အစားတစ်လိုင်းတွေလည်းမြန်မာပြည်မှာ ‘ယောကုချိယ’ ဘယ်တော့ဖွင့်မလဲ
ယောကုချိယ Page https://www.facebook.com/ryoguchiyaMM ကိုလည်း
#Asartaline #FoodReview #Ryoguchiya #Korekiyo #Shinanoji
#Yomoyama #Japan #SweetFood
Posted by AsarTaLine at 3:00 AM No comments:
“မန္တလေးအရသာစစ်စစ်စားချင်သူတွေအတွက် ရန်ကင်းက နန်းတော်ရှေ့ မန္တလေးမုန့်တီ၊မြီးရှည်”
ရန်ကင်းက နန်းတော်ရှေ့ မန္တလေးမုန့်တီ၊မြီးရှည်”
အခုတလော ရန်ကင်းမှာ မန္တလေးလက်ရာ မုန့်တီဆိုင်တွေ နာမည်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့
နာမည်ကြီးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နန်းတော်ရှေ့ကို အက်မင်တို့ သွားစားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်…
ဆိုင်က နာမည်ကြီး သလို နန်းကြီးဖက်ကြီးတွေကလည်း အတော်ကြီးသကိုးဗျ…
မန္တလေးမုန့်တီဆိုတာကို မသိသူတွေကတော့ ထင်မှာပဲ…
မုန့်တီဆိုရင် အရည်ကော အဖက်ကော တွဲဖက်စားရတာလားလို့..
တကယ်တော့ မန္တလေးမုန့်တီဆိုတာ နန်းကြီး/နန်းလတ်သုပ်ပါပဲဗျ
(ဒါလေးကတော့ မသိသူတွေကို သက်သက်ပြောပြတာနော် :D )
အက်မင်တို့ နန်းတော်ရှေ့ကိုရောက်တော့ ဦးဆုံး မှာလိုက်ကြတာဗျ…
မန္တလေးမုန့်တီ (နန်းကြီး)၊ မန္တလေးမုန့်တီ (နန်းလတ်)၊ မြီးရှည်တို့ပေါ့ဗျာ…
မုန့်ပွဲတွေ သုပ်နယ်နေချိန် ဗိုက်အဆာပြေအောင်လို့ တို့ဟူးကြော် ပူပူလေးနဲ့
အမဲအကြောသုပ် အိအိထုတ်ထုတ်လေးကိုလည်း အဆာပြေဆွဲထားနှင့်တယ်ဗျ…
နန်းတော်ရှေ့ရဲ့ မန္တလေးမုန့်တီလက်ရာတွေက ပြောစရာမလိုအောင် အထူးကောင်းမွန်သလို
အချိုမှုန့်/ဓါတုဆေးဝါးတွေ မပါဝင်တဲ့အပြင် ပဲဆီသန့်နဲ့လုပ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း
မန္တလေးကနေ Export Quality ပစ္စည်းသန့်တွေ မှာယူထားတာလို့ သိရပါတယ်…
မုန့်တီနဲ့ မြီးရှည်လက်ရာတွေက မန္တလေးလက်ရာစစ်စစ်ဗျ.. မအီဘူး၊
စားရတာ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ အရသာရှိတယ်…
ဟင်းချိုကို ကြက်သား၊ ဝက်သား သပ်သပ်စီ ခွဲထားပေးတာမို့ ဝက်မစားတဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့...မုန့်တီဟင်းရည်အတွက်က ပိတ်စွယ်ပါဝင်ပြီး၊ မြီးရှည်ဟင်းရည်အတွက်ကတော့
ပဲငပိ ကြက်သွန်ဖြူ တရုတ်နံနံပင် တို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အနှစ်လေးကိုထည့် ချက်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မုန့်ပွဲတွေ စားပြီး အချိုတည်း သောက်တဲ့ ကော်ဖီလေးတွေလည်း သောက်လို့ကောင်းတယ်ဗျ…
ကော်ဖီတွေကလည်း တစ်ခွက်မှ ၅၀၀တည်းရယ်..
နန်းတော်ရှေ့မှာ မန္တလေးမုန့်တီ (နန်းကြီး)၊ မန္တလေးမုန့်တီ (နန်းလတ်)၊ မြီးရှည်၊
အမဲအကြောသုပ်၊ ငါးဖယ်သုပ်၊ တို့ဟူးကြော်၊ ကော်ဖီတို့ရရှိပါတယ်ဗျ…
ဆိုင်မှာထိုင်မစားဘဲ ပါဆယ်ဝယ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း ဖော့ဘူးလေးထဲမှာ၊ ဆီဗူးလေးတွေ၊ မုန့်ဖက်လေးတွေ၊ အသားဖက်လေးတွေနဲ့ တန်ဆာပလာလေးတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ပြင်ဆင်ပေးထားတာက တကယ်ကို သဘောကျစရာပါဗျာ...
အစားတစ်လိုင်းတို့ ထုံးစံအတိုင်း ပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီအောက်မှာလည်း
ဈေးနှုန်းနဲ့ Caption လေးတွေ ရေးထားပေးတယ်နော်…
ဆိုင်လိပ်စာ - အမှတ်(၂၃၀/၃)၊ ရန်ငြိမ်းလမ်းသွယ်(၂)၊ ရန်ကင်း။
(ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံ ထွက်ပေါက်ရှေ့ တစ်ဖက်ခြမ်းလမ်းမှတည့်တည့်ဝင်ရန်။)
ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉-၉၇၉၉၁၇၀၈၁၊ ၀၉-၄၅၅၂၁၁၀၁၆
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - နံနက် ၅း၃၀ မှ ၁၂း၃၀ အထိ
ရနျကငျးက နနျးတျောရှေ့ မန်တလေးမုနျ့တီ၊မွီးရှညျ”
အခုတလော ရနျကငျးမှာ မန်တလေးလကျရာ မုနျ့တီဆိုငျတှေ နာမညျကွီးနတေယျဆိုလို့
နာမညျကွီးဆိုငျတဈခုဖွဈတဲ့ နနျးတျောရှကေို့ အကျမငျတို့ သှားစားဖွဈခဲ့ကွတယျ…
ဆိုငျက နာမညျကွီး သလို နနျးကွီးဖကျကွီးတှကေလညျး အတျောကွီးသကိုးဗြ…
မန်တလေးမုနျ့တီဆိုတာကို မသိသူတှကေတော့ ထငျမှာပဲ…
မုနျ့တီဆိုရငျ အရညျကော အဖကျကော တှဲဖကျစားရတာလားလို့..
တကယျတော့ မန်တလေးမုနျ့တီဆိုတာ နနျးကွီး/နနျးလတျသုပျပါပဲဗြ
(ဒါလေးကတော့ မသိသူတှကေို သကျသကျပွောပွတာနျော :D )
အကျမငျတို့ နနျးတျောရှကေို့ရောကျတော့ ဦးဆုံး မှာလိုကျကွတာဗြ…
မန်တလေးမုနျ့တီ (နနျးကွီး)၊ မန်တလေးမုနျ့တီ (နနျးလတျ)၊ မွီးရှညျတို့ပေါ့ဗြာ…
မုနျ့ပှဲတှေ သုပျနယျနခြေိနျ ဗိုကျအဆာပွအေောငျလို့ တို့ဟူးကွျော ပူပူလေးနဲ့
အမဲအကွောသုပျ အိအိထုတျထုတျလေးကိုလညျး အဆာပွဆှေဲထားနှငျ့တယျဗြ…
နနျးတျောရှရေဲ့ မန်တလေးမုနျ့တီလကျရာတှကေ ပွောစရာမလိုအောငျ အထူးကောငျးမှနျသလို
အခြိုမှုနျ့/ဓါတုဆေးဝါးတှေ မပါဝငျတဲ့အပွငျ ပဲဆီသနျ့နဲ့လုပျပွီး ပါဝငျပစ်စညျးတှကေိုလညျး
မန်တလေးကနေ Export Quality ပစ်စညျးသနျ့တှေ မှာယူထားတာလို့ သိရပါတယျ…
မုနျ့တီနဲ့ မွီးရှညျလကျရာတှကေ မန်တလေးလကျရာစဈစဈဗြ.. မအီဘူး၊
စားရတာ ဆိမျ့ဆိမျ့လေးနဲ့ အရသာရှိတယျ…
ဟငျးခြိုကို ကွကျသား၊ ဝကျသား သပျသပျစီ ခှဲထားပေးတာမို့ ဝကျမစားတဲ့ သူတှအေတှကျ အဆငျပွတောပေါ့...မုနျ့တီဟငျးရညျအတှကျက ပိတျစှယျပါဝငျပွီး၊ မွီးရှညျဟငျးရညျအတှကျကတော့
ပဲငပိ ကွကျသှနျဖွူ တရုတျနံနံပငျ တို့နဲ့လုပျထားတဲ့ အနှဈလေးကိုထညျ့ ခကျြထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
မုနျ့ပှဲတှေ စားပွီး အခြိုတညျး သောကျတဲ့ ကျောဖီလေးတှလေညျး သောကျလို့ကောငျးတယျဗြ…
ကျောဖီတှကေလညျး တဈခှကျမှ ၅၀၀တညျးရယျ..
နနျးတျောရှမှေ့ာ မန်တလေးမုနျ့တီ (နနျးကွီး)၊ မန်တလေးမုနျ့တီ (နနျးလတျ)၊ မွီးရှညျ၊
အမဲအကွောသုပျ၊ ငါးဖယျသုပျ၊ တို့ဟူးကွျော၊ ကျောဖီတို့ရရှိပါတယျဗြ…
ဆိုငျမှာထိုငျမစားဘဲ ပါဆယျဝယျသှားမယျဆိုရငျလညျး ဖော့ဘူးလေးထဲမှာ၊ ဆီဗူးလေးတှေ၊ မုနျ့ဖကျလေးတှေ၊ အသားဖကျလေးတှနေဲ့ တနျဆာပလာလေးတှကေို သပျသပျရပျရပျလေး ပွငျဆငျပေးထားတာက တကယျကို သဘောကစြရာပါဗြာ...
အစားတဈလိုငျးတို့ ထုံးစံအတိုငျး ပုံလေးတှေ တဈပုံခငျြးစီအောကျမှာလညျး
စြေးနှုနျးနဲ့ Caption လေးတှေ ရေးထားပေးတယျနျော…
ဆိုငျလိပျစာ - အမှတျ(၂၃၀/၃)၊ ရနျငွိမျးလမျးသှယျ(၂)၊ ရနျကငျး။
(ရနျကငျးကလေးဆေးရုံ ထှကျပေါကျရှေ့ တဈဖကျခွမျးလမျးမှတညျ့တညျ့ဝငျရနျ။)
ဖုနျးနံပါတျ - ၀၉-၉၇၉၉၁၇၀၈၁၊ ၀၉-၄၅၅၂၁၁၀၁၆
ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျ - နံနကျ ၅း၃၀ မှ ၁၂း၃၀ အထိ
#AsarTaLine #FoodReview #FoodLover #Foodie #Yummy #Delicious #Nantawshae #Yankin #Yangon #Myanmar #MandalayFood #MoteTi #MyeeShay #အစားတဈလိုငျး #မန်တလေးမုနျ့တီ #မွီးရှညျ #ရနျကငျး
Posted by AsarTaLine at 2:53 AM No comments: